Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Lasa antoko pôlitika ny « Wisa » ?
Inty sy Nday: Lasa antoko pôlitika ny « Wisa » ?
Nahatsiaro ny faha-38 taonan’ny nidiran’ny haiady Kung Fu teto Madagasikara ny faran’ny herinandro teo, tany Tsiroanomandidy ny “Kung Fu Wisa”. Ny “Wisa” izany dia karazana rafitra na “style” amin’ity haiady “kung fu” ity. Ny Me Avoko Rakotoarijaona, zanakalahin’ny Me Piera Be no mitarika azy io. Tena miroborobo tokoa aloha ilay izy, ary manerana ny Nosy dia misy ny mpiangaly azy avokoa.
Ny mahavariana ny maro dia tsy mijanona ho taranjam-panatanjahan-tena fotsiny ny Me Avoko Rakotoarijaona amin’izy io fa miditra lalina mihitsy amin’ny raharaha pôlitika. Amin’ny lafiny iray dia tena rariny sy hitsiny raha mandray anjara amin’ny resaka raharaham-piaraha-monina, toy ny fiarovana ny rariny, ny fiahiana ny marefo, ny fanampiana ny sahirana… indrindra fa eo anoloan’ny asan-jiolahy sy ny dahalo ny mpiangaly an’io haiady io, ary tokony ho toa izany avokoa ireo lmanana talenta amin’ny haiady. Matetika anefa no tsy mianona ao anatin’izay fanadraisana anjara amin’ny raharaham-piaraha-monina izay ny Me Avoko Rakotoarijaona fa mampiditra ny “Kung Fu Wisa” amin’ny fanohanana olona ara-pôlitika. Tranga manahirana izany satria ny mpanao “Kung Fu” rehetra dia tsy voatery hitovy fironana pôlitika, ary matetika dia izany no maharava ny fiarahana amin’ny rafitra na sehatra iray. Raha resahina ny hoe “tsy manavaka foko, tsy manavaka fuirehana pôlitika, tsy manavaka finoana ara-pivavahana…” dia mba hitsinjovana ny fampiraisana ary mba hisorohana ny fahapotehana dia hajaina izay. Saingy matetika koa dia misy ny manararaotra an’izany, ka rehefa vorivory ny mpikambana, nahazo mpiara-dia maro, dia avadiky ny olona sasany, matetika ny mpitarika ho amin’ny tombon-tsoany manokana izany. Dia ampiasainy hitadiavany vola ho azy manokana. Ampiasainy hahazoany toerana pôlitika manokana, sy ny sisa.
Raha ny Me Avoko Rakotoarijaona manokana no asian-teny dian efa tamin’ny 1996 izy no nokianin’ny mpanao Kung Fu maro satria nentiny sy ny reniny nakana tombontsoa manokana ka nanohanany ny Amiraly Ratsiraka ny anarana Kung Fu nefa ny rainy, Me Piera Be vdia ny Amiraly Ratsiraka no namono azy. Nanohana ny Amiraly Ratsiraka hatrany izy hatramin’ireny Raharaha 2001-2002 ireny, saingy tampoka teo, rehefa tsinjony fa tsy mantsy handeha hitsoaka mankany ampita Ratsiraka, izany hoe tsy ho azo ianteherana intsony, tsy hahitana tombontsoa manokana intsony, dia indro izy nivadika tampoka nanohana an-dRavalomanana, raha mbola tao anatin’ny tolona nivaivay ny firenena. Nanohana an-dRavalomanana izy hatramin’ny 2009. Raha vao nigadona teny Ivato avy nanao sesitany ny tenany indray ny Amiraly Ratsiraka tamin’ny 2010 dia ny Me Avoko no teo anilany nanomboka teny Ivato. Nikasa hirotsaka hofidiana filohampirenena ny Me Avoko tamin’ny 2013. Nikaroka loharanom-bola ary efa nikasa hisambo-bola mihitsy, fa ny vadiny no nisakana izany, dia lasa nanao fikaramana an’ady tany amin’ny Kandida Rabetsaroana izy. Tonga Rajaonarimampianina, dia io izy maneho tokim-panompoana ny Hvm io, ary ny anaran’ny Kung Fu Wisa no entiny amin’izany.
Maro amin’ny mpikambana Kung Fu Wisa no menatra sy tsy mankasitraka an’izany fihetsika ny Me Avoko izany, izay sokajian’ny olona sasany ho antoko pôlitika mihitsy, ary ny maro dia milaza fa tena mpikarama an’ady amin’io sehatra io izy. Taratry ny toe-tsaina tia vola izany, ary tsy mahamenatra an-dry zareo ireny mihitsy ny manosihosy ny aina sy ran’ny ray aman-dreniny. Na ny fihetsik’izy io fony fahavelon-drainy aza ange ka tia setrasetra tany amin’ireo toeram-pianarana maro teto andrenivohitra izy e! Fantatra ny sokajin’olona maro izany tany amin’ireny taona 1984 ireny.